Izimboni Namacala / Isicelo
Amafutha neGesi / Izimayini
Ikhemisi / Umanyolo
Inqubo Yezimboni Ukupholisa / Ukubuyisa Isimo Somoya
Cross Flow Evaporative Condenser - Uchungechunge lwe-SPL-S
I-Counter Flow Evaporative Condenser- Uchungechunge lwe-SPL-N
Kuvaliwe Isifunda Ukupholisa Umbhoshongo
Kuvaliwe Loop Cooling Tower - Cross Flow
Kuvaliwe Loop Cooling Tower - Counter Flow
I-Steel Open Loop Cooling Tower
I-D1, Isitsha Sokucindezela se-D2
Isitoreji Esishisayo Seqhwa
Ithimba Lethu Namasiko
Imibuzo evame ukubuzwa / Ukulanda
Ifomu Lokuxhumana / Lokubuza
Shanghai Bao Feng Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd.
I-SPL yasungulwa ngonyaka we-2001 futhi iyinkampani ephethwe ngokuphelele yeLianhe Chemical Technology Co, Ltd. (Yabelana ngekhodi 002250). I-SPL itholakala epaki lezimboni zedolobha laseBaoshan eShanghai, enohlelo oluhle kakhulu lokuxhuma nezokuthutha, eduze komakhelwane nomgwaqo wendandatho ongaphandle weshanghai, no-13km kude nesikhumulo sezindiza saseHongqiao, no-12km ukusuka eShanghai Railway Station. Ifektri yeSPL yakhiwe endaweni engama-27,000m2, okubandakanya indawo enkulu yokwakha eyi-18,000m2. Le nkampani i-ISO 9001: 2015 iqinisekisiwe futhi ilandela ngokuqinile imihlahlandlela ebekwe ngaphansi kwalolu hlelo lokuphathwa kwekhwalithi.
I-SPL igxile kwezentuthuko, ukuklama, ukuthengisa kanye namaphrojekthi we-turnkey wemishini yokushintshanisa ukushisa. Imikhiqizo yethu eyinhloko i-evaporative condenser, i-Air cooler, i-evaporative air cooler, i-Closed circuit cooling tower, i-Refrigerating imishini yokusiza, i-pressure container, i-ice storage cooler system yeBanga D1 ne-D2. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-30 zochungechunge nezinhlobo ezingama-500 zemikhiqizo esetshenziselwa kabanzi i-Air Compressor Cooling, Izinsimbi Zezinsimbi Ukupholisa, Ukupholisa Isithando Somlilo, Ukupholisa Isithando Somlilo, Ukupholisa i-HVAC, Amafutha kanye nezinye izinqubo zokupholisa i-Fluid, Ukupholisa kohlelo lwe-Ground Source Heat Pump, Idatha Izikhungo, Iziguqululi Zemvamisa, Imishini Yokujova, Imigqa Yokuphrinta, Ama-Drawbenches, Izithando Zezimboni zePolycrystalline, njll.
Izinsiza kusebenza ze-Hi-Tech
Imishini yethu yokukhiqiza eyinhloko ingeniswa ngqo isuka eJalimane.
Amandla we-R & D aqinile
Sinabanjiniyela abaphezulu abayi-6, onjiniyela abayi-17, onjiniyela abasizayo abangama-24 esikhungweni sethu se-R & D, bonke bangodokotela noma oprofesa base-University of Science and Technology yaseChina.
Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile
3.1 Okubalulekile okusetshenzisiwe.
Udonga Olukhulu lwe-Galum
Igobolondo lenziwe ngocwecwe oluphezulu lwe-Aluzinc olunokumelana nokugqwala okuqinile nokuqina okuphindwe izikhathi ezi-3-6 kunalezo zamapuleti ajwayelekile e-Aluzinc. Amapuleti anokumelana okuqinile kokushisa, nobuhle ngokubukeka.
I-55% Aluminium- Inzuzo: Ukumelana nokushisa, impilo ende
I-43.4% iZinc—— Inzuzo: Ukumelana namabala
I-1.6% Silicon — Inzuzo: Ukumelana nokushisa
ISuper Galum yigama lomkhiqizo lishidi lensimbi eliboshwe ngama-55% aluminium-zinc. ISuper Galum imelana nokushisa nokugqwala kakhulu, okuhlanganisa izakhiwo ze-aluminium ezinikezela ukuqina okukhuphukile, ukumelana nokushisa okuhle kakhulu, ukwakheka, kanye nalokho kwe-zinc okunikeza ukumelana nokushisa okuphezulu nokuvikelwa kokugqwala okuhle kakhulu. ISuper Galum imelana nokugqwala kwemeski kathathu kuye kwayisithupha kunensimbi yensimbi ejwayelekile ebiza izindleko zensimbi.
Amakhoyili we-SPL's condensing coil akhiqizwa kwa-SPL kusuka kubhubhu yensimbi esezingeni eliphakeme kulandela izinqubo eziqinile kakhulu zokulawula ikhwalithi. Isifunda ngasinye siyahlolwa ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu yempahla.
Wonke amakhoyili we-SPL akhiwa ngocezu olulodwa oluqhubekayo kusetshenziswa ulayini wokukhiqiza wamakhoyili othomathikhi oyingqayizivele, le nqubo ibekela imingcele i-welding, inyusa ukusebenza kahle kokukhiqiza nezikhathi zokuhola kwasefekthri.
Amakhoyili avivinywa ngamanzi okungenani kathathu ngesikhathi senqubo ekukhiqizeni ku-2.5MPa ingcindezi yokuqinisekisa ukuthi avuza mahhala.
I-coil ivikela ukugqwala, amakhoyili afakwa kufreyimu yensimbi esindayo bese inhlangano yonke icwiliswa ku-zinc encibilikisiwe (i-hot-dip galvanized) ethempelini lika-427oC, amashubhu afakwa lapho kugeleza khona uketshezi ukuhlinzeka ngamapayipi amahle ketshezi.
Amakhoyili ajwayelekile we-SPL ahlinzeka ngokusebenza okuphumelela kakhulu kokudluliswa kokushisa ngobuchwepheshe bekhoyili bese ugcwalisa inhlanganisela ukugwema indawo eyomile nokungcola okwakheka kumakhoyili.
I-Element Yokulungisa Enokwethenjelwa
Amakhabethe we-BTC asebenzisa i-dacromet bolt ukuxhuma, i-inoxidability iphelele kakhulu kunamabhawodi avamile, okwamanje iqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwe-cooler isikhathi eside.
Umlandeli we-axial wemigqa ye-SPL usebenzisa ama-carbon fiber blades ngaphambili fan egobile, lokhu kunikezwa, ivolumu yomoya ephezulu, umsindo ophansi, ukusebenza okuphelele ngokusebenza kahle okuphezulu.
I-Nozzle Yesifutho Enobunikazi
Umbhobho wokufafaza wamahhala wobunikazi obunelungelo lobunikazi we-SPL uhlala ungavaliwe ngaphandle kokunikezwa nokusatshalaliswa kwamanzi njalo kokupholisa okuthembekile, okungenasikali okuphuma evaporative ngaphansi kwazo zonke izimo zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, imibhobho ifakwa emapayipini okusabalalisa amanzi angenakho ukugqwala futhi inezindwangu zokuvala izintambo.
Ngokubambisana, lezi zinto zihlangana ukuhlinzeka ukumbozwa kwamakhoyili okungalingani nokuvinjelwa okukhulisiwe, okubenza babe uhlelo oluhle kakhulu lokusabalalisa amanzi olungonakalisi, olunganakekeli.
Iphampu Yokujikeleza Amanzi
Ukusebenza okuphezulu kwe-Nokia drive motor, ngokuhamba ngobuningi nangomsindo ophansi. Isebenzisa uphawu lokuvinjelwa olungavinjelwe okungalawuleki, oluvuza mahhala nesikhathi eside.
I-Electronic De-scaling Cleaner
I-elektroni yokuhlanza amandla ihlinzeka ngama-98% ukusebenza okuthe xaxa ngaphezulu kokuvinjelwa kwesikali samanzi futhi ngaphezulu kwama-95% kukhulise inzalo nokususwa kwe-algae kubuchwepheshe be-elekthronikhi obuphezulu kakhulu. Idizayinelwe ikakhulukazi imibhoshongo evaliwe yokupholisa amaluphu nama-condensers okhuphukayo asetshenziswa ngamandla aphansi.
Uhlobo lobuningi lwezinyosi lwezinyosi lwe-PVC
Idizayini yokugcwalisa ye-SPL® esetshenziswe emugqeni we-S lines evaporative condenser kanye nokupholisa kuklanyelwe ngokukhethekile ukudala ukuxubana okuxakile kakhulu komoya namanzi okudlulisa ukushisa okuphezulu. Izeluleko ezikhethekile zokuhambisa amanzi zivumela ukulayishwa okuphezulu kwamanzi ngaphandle kokwehla kwengcindezi ngokweqile. Ukugcwaliswa kwakhiwe nge-inert polyvinyl chloride, (PVC). Ngeke ibole noma ibole futhi yakhelwe ukumelana namazinga okushisa amanzi angama-54.4ºC. Ngenxa yendlela eyingqayizivele yoju -ibhokisi lapho amashidi agobekile ahlanganiswe ndawonye, ​​nokusekelwa okuphansi kwesigaba sokugcwalisa, ubuqotho besakhiwo bokugcwaliswa buthuthukiswa kakhulu, okwenza ukugcwaliswa kusetshenziswe njengeplatifomu yokusebenza. Ukugcwaliswa okukhethelwe i-Condenser ne-Cooling Tower kunezimpawu ezinhle kakhulu zokumelana nomlilo.
Uhlobo lwezinyosi lwe-PVC lokugxilisa kanye nedizayini emfushane evundlile yokungenisa umoya ingaqinisekisa ukumuncwa kokushisa yomoya opholile ngokushesha.
Ubunikazi be-Air Inlet Louver
Ngohlelo lokudlula lwe-lolve ezimbili, amaconsi amanzi athathwa ephasiphini elingaphakathi, ukunciphisa izinkinga zokuqhuma. Idizayini eyingqayizivele ye-lPL ye-lPL yayo yonke imigqa ye-SPL's N ivala ngokuphelele indawo yokugezela. Ukukhanya kwelanga okuqondile kuvinjelwe emanzini ngaphakathi kukondenisi nokupholisa umbhoshongo, ngaleyo ndlela kunciphise amandla okwakhiwa kwe-algae. Izindleko zokulungiswa kwamanzi nokugcinwa kwazo zincishiswe kakhulu. Ngenkathi iqukethe ngempumelelo amanzi aphindaphindayo nokuvimba ukukhanya kwelanga, ukwakheka kwe-louver kunokwehla kwengcindezi ephansi. Ukwehla kwengcindezi okuphansi kuphumela ekusetshenzisweni kwamandla kagesi okuphansi, okunciphisa izindleko zokusebenza kombhoshongo wokupholisa.
I-Slope basin enokuhlanza okulula
Umthambeka wasezansi wokukhipha ipayipi ungahlanza indle nokungcola kube lula
Ubuchwepheshe Othuthukile be-Elliptical Coil
Ama-condensers amasha akhuphukayo asebenzisa i-elliptical fin coil design eqinisekisa ukusebenza kahle okukhulu. Idizayini ye-elliptical tube ivumela ukusondelana kwamashubhu, okuholela endaweni enkulu endaweni ngayinye yohlelo kunokwakhiwa kwamakhoyili we-tube tube. Ngaphezu kwalokho, umklamo wezinguquko we-elliptical usebenzisa i-elliptical spiral fin coil technology futhi unokumelana okuphansi kokuhamba komoya kunokwakheka kwamakhoyili ajwayelekile. Lokhu kuvumela ukulayishwa okukhulu kwamanzi, okwenza ikhoyili entsha eyisiyingi ibe idizayini esebenza kahle kunazo zonke etholakala emakethe.
Uchungechunge lwe-BTC-Uhlobo olusha lwamanzi we-wallboard-Designed Patent
Umgodi omusha wokuhambisa amanzi ekhoneni eligoqiwe ku-wallboard uklanyelwe ukukhipha amanzi emvula, ukunciphisa amabhawodi nokugqwala kwe-wallboard, kube nomphumela omncane kusimpawu nokubukeka konke, futhi kunwebe impilo yenkonzo.
Idizayini Ehlanganisiwe Yezindleko Zokuthumela Eziphansi
Imikhiqizo ye-SPL Series yenzelwe ukuthi ithunyelwe ngekithi kusuka kulokho okulingana neziqukathi.
Iminyango Enkulu Yokungena negumbi elingaphakathi elinomusa lenza ukuba kuhlolwe futhi kulungiswe kalula. Isiteji esitshekile ngaphandle kulula ukusikhuphula futhi sehle.
Iqhude lebhola nesihlungi se-SPL Series kungahlolwa futhi kulungiswe ngaphandle kokumisa ukusebenza kwe-condenser ngenxa yesiqondisi esifanayo sokugeleza komoya nokugeleza kwamanzi. Imibhobho namakhoyili nakho kungahlolwa futhi kulungiswe ngesikhathi sokusebenza.
3.2 Kuphelile Imikhiqizo Ukuhlolwa.
Sisungule amapulatifomu wokuhlola umbhoshongo ongaphakathi endlini, anezinhlobo ezahlukene zeshubhu eShanghai. Ngokubambisana neyunivesithi yase-East China University of Science and Technology, senza ukubambisana kwamabhizinisi ukusebenzisa umbono ophakeme kakhulu wesayensi kokubili imikhiqizo yasekhaya neyokuthekelisa yenkampani. Siyaqhubeka nokuhola ukuthambekela kwemakethe ngemishini ehamba phambili, ubuchwepheshe bamuva. Sihlanganyele ohlakeni oluyisithupha lwendawo yaseShanghai kanye nezinga elilodwa lomkhakha.
Sakha izinhlobo ezahlukahlukene zepulatifomu yokuhlola yama-condensers evaporative, ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokusebenza okuphezulu komkhiqizo ophumayo.
Sizinikezele ukwakha amabhizinisi ekilasi lokuqala, senze imikhiqizo esezingeni lokuqala. I-CTI (Cooling Technology Institute) evela e-USA iqinisekise i-Cooling Towers yethu minyaka yonke, ukusebenza komkhiqizo wethu kusinikeze isikhundla esiphambili eChina.
Sithuthukise ngempumelelo inhlanganisela yokuqala yomoya opholile wephrojekthi ye-poly-silicon etholakala endaweni eyomile ethambekele ekuphepheni kwesanti eChina enikeza ukonga amanzi namandla. Isakhiwo esikhethekile sokungena komoya sivimbela isihlabathi nothuli kwimishini enomoya, futhi kunciphisa kakhulu ukulahleka kokujikeleza kwamanzi. I-fan ephelele yokuguqulwa kwemvamisa, ifinyelela ukulawula okuhle kokushisa, nokonga amandla amaningi. Ukuqiniswa kwesakhiwo semishini, ukutshalwa kwezimali ngesikhathi esisodwa, impilo ende, uhlelo lokuhambisa amanzi oluvaliwe ngedivayisi yesifutho yesayensi, engcono ekongeni amanzi.
China Fist igesi yemvelo ipholisa ukupholisa iphrojekthi ku-CNOOC
I-China Fist sulfur dioxide ukufingqa isitshalo iphrojekthi eWest Mining
Iphrojekthi yezitshalo zeChina Fist Ethyl acetate condensation eXinfu Bio.
Osayizi ngokwezifiso kanye bobunjwa ayatholakala. Uyemukelwa ukwaba umbono wakho nathi, masisebenzisane ukwenza impilo ibe nobuciko ngokwengeziwe.
I-SPL yasungulwa ngo-2001 futhi sekuneminyaka engama-20 ikhiqiza ukushisa kokushisa. Sinekhono lokucwaninga nokuthuthuka ngaphakathi, kanye nezinga lemboni ethuthukile ekucubunguleni, ekwelapheni ukushisa, ekusetshenzisweni kwemishini, ekuvivinyweni ngokomzimba nangokwamakhemikhali, amakhono wokulawula ikhwalithi.
2002 I-condenser yokuqala ephumelelayo yokuhwamuka
Iqembu labasebenzi abahle kakhulu linikezelwe kwimishini yokushintshanisa ukushisa kwamakhemikhali esezingeni eliphakeme ngamashumi eminyaka wesipiliyoni ku-R & D nasekukhiqizeni. Leli thimba lifaka onjiniyela abaphezulu abayi-6, onjiniyela abangu-17, onjiniyela abasizayo abangama-24, kanye nochwepheshe abangama-60. Le nkampani inezindawo eziningi zokukhiqiza ezithuthukile nezinsimbi zokuhlola ezivela ekhaya nangaphakathi, njenge-othomathikhi yokushisela isikhungo, umshini we-X-Ray, umshini we-ultrasonic, umshini wokuhlola oshaqisayo, umshini wokuhlola ukungezwani. Isikhundla esihola phambili embonini ye-SPL siqinisekisiwe ngokwethula ngokugcwele ubuchwepheshe bamuva basekhaya nabangaphakathi, ukuthatha izinzuzo, nobuchule nobuchwepheshe obuhle kakhulu bemishini.
Umkhiqizo womhlaba usekelwa yisiko lenkampani. Sikuqonda kahle ukuthi isiko lakhe lezinkampani lingakhiwa kuphela nge-Impact, infiltration and Integration. Ukuthuthuka kweqembu lethu kusekelwe ngamanani akhe ayisisekelo kule minyaka edlule -------Ukwethembeka, Ukuqamba, Isibopho, Ukubambisana.
Iqembu lethu lihlala lihambisana nomgomo, oqondiswe kubantu, ukuphathwa kobuqotho,
ikhwalithi enkulu, idumela le-premium Ukwethembeka sekuyikho
umthombo wangempela weqembu lethu lokuncintisana.
Ukuba nomoya onjalo, sithathe zonke izinyathelo ngendlela engaguquguquki futhi eqinile.
Ukuqamba kungumongo wesiko lethu leqembu.
Ukuqamba kuholela entuthukweni, okuholela ekwandeni kwamandla,
Konke kuvela emisha.
Abantu bethu benza izinto ezintsha ngomqondo, indlela yokusebenza, ubuchwepheshe kanye nokuphathwa.
Ibhizinisi lethu lihlala lisesimweni esivumelekile ukubhekana nezinguquko zamasu nezemvelo futhi lilungele amathuba avelayo.
Isibopho senza umuntu akwazi ukubekezela.
Iqembu lethu linomuzwa oqinile wokuzibophezela kanye nomsebenzi kumakhasimende nomphakathi.
Amandla wesibopho esinjalo awabonwa, kepha angazwakala.
Bekulokhu kungamandla ashukumisayo ekuthuthukiseni iqembu lethu.
Ukubambisana kungumthombo wentuthuko
Silwela ukwakha iqembu elibambisanayo
Ukusebenza ngokubambisana ukudala isimo sokuwina kuthathwa njengomgomo obaluleke kakhulu ekuthuthukiseni izinkampani
Ngokwenza ngempumelelo ukubambisana ngobuqotho,
Iqembu lethu likwazile ukufeza ukuhlanganiswa kwezinsizakusebenza, ukuvumelana ngokubambisana,
vumela abantu abangochwepheshe banikeze ukudlala okugcwele ekukhetheni kwabo
IMISEBENZI EYESABEKAYO IQEMBU LETHU ELIYINIKELELE KUMAKlayenti Ethu!
I-S- SPECIAL ifezekisa ama-win win amaningi
Gxila entuthukweni, ekwakhiweni, ekukhiqizeni, ekuthengiseni nasezinsizeni zephrojekthi yemishini yokudlulisa ukushisa;
Sungula ubudlelwano obusondelene neShanghai Jiao Tong University, iSouth China University of Technology, iShanghai Ocean University, i-East China University of Science and Technology, iHarbin University of Commerce,
Ungumnikazi welungelo elilodwa lobunikazi lobunikazi obukhethekile kazwelonke kanye namalungelo obunikazi bemodeli wokusetshenziswa angama-22;
Yiba isisekelo sobuchwepheshe kanye nocwaningo lwaseNingizimu China University of Technology ekuthuthukiseni ukudluliswa kokushisa nokonga amandla;
Bamba iqhaza ekwakhiweni kwamazinga endawo ayi-6 e-Shanghai njengo:
✔ "I-evaporative condensers inani lokukhawulela ukusebenza kahle kwamandla nokukala kwamandla"
✔ "Ukusetshenziswa kwamandla okugcina okubandayo ngeyunithi ngayinye kunani elilinganiselwe nokukala kwamandla"
✔ "Uhlelo olujwayelekile lokuphathwa kwamandla ebhizinisi"
✔ "Izindlela zokuphepha zokukhiqiza zokukhiqiza ezibandayo ze-ammonia"
✔ "Izindinganiso zokuphothula amandla okuvala ukupholisa okuvaliwe"
✔ "Inqubo yokubumba i-axial fan energy energy kanye namanani wokulinganisela wokonga amandla"
Bamba iqhaza ekwenziweni okujwayelekile “kwezindlela zokuhlola zaselabhoratri ezifudumayo zefriji evundayo”.
P- UProfessional othembekile
✔ Uneqembu elihle kakhulu lonjiniyela be-R & D kanye nabakhiqizi abanamakhono abanokuhlangenwe nakho okungamashumi eminyaka.
✔ Imishini yokukhiqiza nokuhlola esezingeni eliphakeme efana nesikhungo sokushisela okuzenzakalelayo, imishini yokuhlola umthelela, njll.
✔ Ungumnikazi womugqa wokukhiqiza wepayipi othuthuke kakhulu wasekhaya, nomugqa wokugoba ipayipi.
✔ I-D1, ilayisensi yokuklama umkhumbi nengcindezi yokukhiqiza ingcindezi.
✔ Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwamanani we-ISO9001-2015ququ.
✔ Phasa isitifiketi se-CTI.
✔ I-qualification yokufaka ipayipi yengcindezi ye-GC2.
✔ Thuthukisa isoftware yokuhlaziya evaporative neShanghai Ocean University, bese unikezwa isitifiketi sokubhaliswa kwesoftware yekhompyutha seNCAC.
✔ IShanghai Science and Technology Giant Breeding Enterprise.
✔ IShanghai High-Tech Enterprise.
✔ Ukuqanjwa kweSayensi Nobuchwepheshe beShanghai - Umklomelo Wesibili.
✔ I-Shanghai Science and Technology inqubekela phambili- Umklomelo Wesithathu.
✔ I-Shanghai Contract Credit AAA Class.
Ilungu le-Shanghai Energy Conservation Association.
✔ Ilungu Elilawulayo le-Shanghai Science and Technology Enterprises Association.
Ilungu le-Shanghai Association for Promotions of Science and Technology Achievements.
L- UKUHOLA intuthuko yezimboni
✔ Icala lokuqala le-Shanghai Gaoqiao Sinopec lokuqhekeka lokupholisa iphrojekthi;
✔ Icala lokuqala lezwe le-CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) iphrojekthi yemvelo yokupholisa umoya opholile;
✔ Icala lokuqala lezwe WESTERN MINING sulfur dioxide condensing recycling project;
✔ Icala lokuqala lezwe le-XIN FU biochemical ethyl acetate evaporative cooling project;
AMABONO AMANDLA BONISA
Yazi kabanzi ngathi, izokusiza okuningi
01 Isevisi yokuthengisa ngaphambi kwesikhathi
- Uphenyo nokubonisana nokwesekwa iminyaka engu-20 esiqandisini isipiliyoni sobuchwepheshe.
- One-to-one service engineer yokuthengisa.
- I-Hot-line of service iyatholakala ngo-24h, iphendulwe ngo-8h.
02 Ngemuva kwenkonzo
- Ukuhlolwa kwezinsiza kusebenza zokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe;
- Ukufaka nokulungisa inkinga ye-Troubleshoot;
- Isondlo Update kanye ngcono;
- Isiqinisekiso sonyaka owodwa. Nikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe mahhala yonke impilo yemikhiqizo.
- Gcina impilo yakho yonke ixhumana namakhasimende, thola impendulo ngokusetshenziswa kwemishini futhi wenze ikhwalithi yemikhiqizo ihlale iphelelisiwe.
Ikheli: Cha. 458 Gongye Road Baoshan District Shanghai, 200444, China
Ucingo: sishayele manje: + 86-21-36160669
Kungani isitoreji seqhwa?
Kungani isitoreji seqhwa? I-Ice Storage System isebenzisa iqhwa ukugcina amandla okushisa. Ebusuku, uhlelo lukhiqiza iqhwa ukugcina ukupholisa, kuthi emini bakhiphe ukupholisa ukuhlangabezana nezidingo zikagesi eziphakeme. Ice stor ...
Amathiphu Amancane kuma-SPL Evaporative Condensers
Ungenzi noma iyiphi isevisi noma eduze kwabalandeli, ama-motors, noma amadrayivu noma ngaphakathi kweyunithi ngaphandle kokuqinisekisa kuqala ukuthi abalandeli namaphampu bayanqanyulwa, bavalelwe ngaphandle, futhi bamakiwe. Hlola ukuqinisekisa amabombo motor fan ...
Imboni Yesiqandisi Izobhekana Nenguquko
UGao Jin, onguMqondisi-Jikelele woMnyango Wezokuguquguquka Kwesimo Sezulu, uthe njengamanje amandla okubopha amandla e-carbon kakhulu eChina ikakhulukazi e-carbon dioxide. Isinyathelo esilandelayo ukuqinisa izilawuli kuma-HFCs, futhi uvule kancane kancane ...
I-condenser evaporative ithuthukisiwe kusuka embhoshongweni wokupholisa. Isimiso sokusebenza kwaso ngokuyisisekelo siyefana nesombhoshongo wokupholisa. It is ikakhulukazi sakhiwa ukushisa, uhlelo amanzi kwegazi fan syste ...
Joyina Izandla Ukulwa Nobhubhane
NgoMashi 4, 2020, indiza evela eBrazil yafika ngokuphepha eShanghai, ithwele izifihla-buso ezingama-20 000 ze-PFF2 ezinikelwe yiLianhe Chemical Technology Co, Ltd., Eya eTaizhou Red Cross. Leli yiqoqo lesihlanu ...